तपाईंको प्रोफाइल नि: शुल्क सेट गर्नुहोस्: तपाईंको ट्विटर खाता अनलिink्क गर्नुहोस्
आइतबार, जुलाई 1, 2012 आइतबार, जुलाई 1, 2012 माइकल रेनल्ड्स
म स्वीकार गर्दछु ... को भर्खरको घोषणा विभाजन ट्विटर र लिंक्डइनको बीचमा मेरो मुटु न्यानो भयो। अब देखि व्यक्तिहरूले लि in्कइनमा उनीहरूको ट्विटर अपडेटहरू केवल दिमागमा ब्लास्ट गर्न सक्नेछन वास्तवमा लग इन र स to्लग्न नगरीकन।
जबकि मलाई थाहा छ अरुले मेरो खुशी लिई साझा गरे, तपाईका ट्विटर खातालाई अन्य नेटवर्कमा लिंक गर्ने कस्ता फाइदा र विपक्षहरू छन्? किनकि फेसबुकले अझै यो अभ्यासलाई अनुमति दिन्छ, यो अहिले पनि भइरहेको छ। जबकि यसले मलाई नटहरू ड्राइभ गर्दछ, मँ त्यहाँ स्वीकार गर्छु केही फाइदाहरु छन् if शिष्टतापूर्वक प्रयोग - तर लगभग एक मा गर्दछ।
त्यसोभए के फाइदा हुन्छ?
यो कुशल छ। त्यहाँ इन्कार गर्ने कुरा छैन कि हामी सबै व्यस्त भइरहेका छौं र बहुविध सामाजिक नेटवर्कहरूसँग सम्पर्क राख्न सीमित समय छ। एक अर्कामा स्वत: पोष्टिंग द्वारा, तपाईं निश्चित रूपमा समय बचत गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै कटाई र सुक्खा।
थप रूपमा, यदि तपाईं सोशल मिडियामा मार्केटिंग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंको पहुँचलाई विस्तार गर्दछ। जे होस् ...
यी खाताहरू सँगै जोड्ने एक डाउनसाइड "अनौंठो सिन्ट्याक्स" कारक हो। ट्विटर कुराकानीले यस नेटवर्कलाई निर्दिष्ट प्रतीकहरू समावेश गर्दछ, जस्तै "@" प्रतीकहरू र ह्यासट्यागहरू (हेर्नुहोस्: एक हैशटैग के हो?)। यदि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले यी क्यारेक्टरहरू उनीहरूको समाचार फिडहरूमा देख्दछन्, तपाईं तिनीहरूलाई अलग्गिने जोखिममा दौडनुहुन्छ किनभने तपाईंको पोष्टहरू भ्रामक र अनौंठो देखिन्छ। यो संलग्नता घटाउँछ।
थप रूपमा, प्रभावकारी सामाजिक मिडिया उपयोग सामान्यतया समावेश गर्दछ सुन्दै, र यदि तपाईं क्रस-लिinking्क गर्ने अद्यावधिकहरू हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग लगइन गर्न र कसैसँग कुरा गर्ने कुनै कारण छैन। तपाईं भित्र पस्नुभयो प्रसारण मोड.
यो खराब हो, जब अर्को दिशामा पनि जान्छ। म मान्छेहरु लाई देख्छु कि उनीहरुका फेसबुक अपडेटहरु ट्विटर मा धक्का लाग्छ, साथै, जो काटिएको अपडेटमा परिणाम दिन्छ (जस्तै यो) वा अझ खराब, अनाथ लिंक बिना कुनै स्पष्टीकरण (जस्तै) यो).
अन्तमा - यो केवल सादा कष्टप्रद छ, हैन? के हामी प्रसन्न-बाहिरका प्रतीकहरू र काटिएका ट्वीट्सले भरिएको अल्छी स्थिति अपडेटहरू देखेर थकिएका छैनौं?
तपाईंको प्रोफाइल नि: शुल्क सेट गर्नुहोस्
म सिफारिश गर्दछु कि यो अवसरलाई तपाईको फेसबुक र ट्विटर खाताहरूलाई लिmp्कमा लिl्क हटाउन र वास्तवमा सुरू गर्न भाग लिने इरादाको साथ प्रत्येक नेटवर्कमा। म भविष्यवाणी गर्दछु कि तपाईले स engage्लग्नताको उच्च स्तर देख्नुहुनेछ र तपाईले उनीहरूलाई जसरी उद्देश्य प्रयोग गर्नु भएको थियो त्यस्तै गरी रहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालहरू।
टैग: फेसबुकLinkedInसामाजिक संजालtwitter
माइकल स्पिन वेबको अध्यक्ष र सीईओ हुन्, एक डिजिटल एजेन्सी डेलिभर गर्ने कर्पोरेट वेब डिजाइन समाधान र डिजिटल मार्केटिङ। माइकल इनबाउन्ड मार्केटि Cer प्रमाणित छ र उद्योग कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय रूपमा बोल्दछ।
प्लक समीक्षाको साथ ग्राहक रेटिंग
जुलाई १,, २०१ at १::1२ अपराह्न
म डराउँछु कुनै तरिका छैन जुन म तिनीहरूलाई अनलिंक गर्न जाँदैछु। हामी सामग्रीको एक टन पुश गर्दैछौं र उद्देश्य सधैं कुराकानीलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन - धेरै चोटि यो हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नु हो। त्यस अर्थमा यो एक सफल रणनीति हो। जबकि म हरेक सन्देश स hand्केत दिन र दिनभर सोशल मीडियामा रहन मन पराउँछु ... म त्यो अवसरको लागि सक्षम छैन।
मैले अनुमान लिएँ तपाईं त्यो भन्नुहुनेछ, डग 🙂 हामी सबै सामाजिक नेटवर्कहरू बिभिन्न रूपमा प्रयोग गर्छौं र यदि तपाईंको लक्ष्य कडा रूपमा प्रसारण गर्न हो भने तपाईंको तर्कले अर्थ राख्छ। म निश्चित रूपमा एक प्राथमिकता छ (स्पष्ट) तर यसको मतलब त्यहाँ एक निश्चित "सही" वा "गलत" छैन।
मलाई लाग्छ कि तिनीहरूलाई अनलिंक गर्न एक उत्तम विचार हो। मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि मैले तिनीहरूलाई लिंक गरेको थिएँ तर त्यसो भयो भने यदि तपाईंसँग अनलाइन मार्केटिंगको भागको रूपमा प्रत्येक प्लेटफर्ममा ताजा सामग्री छैन भने मान्छेसँग प्रत्येक खाता अनुसरण गर्ने कुनै कारण छैन।
जुलाई,, २०१ at 2::2012। बिहान
स्वचालित सोशल मिडियाले समय बचत गर्दछ, तर यदि त्यसले होशियार भएन भने त्यसले त्यो सामाजिक तत्वलाई लिन सक्छ। सामाजिक मिडिया उपकरणहरू प्रयोग गरेर नेटवर्कमा उही सन्देश प्रकाशित गर्न सजिलो हुन सक्छ तर तपाईले प्रत्येक खाता जाँच गर्नुपर्नेछ र जब सोधपुछ हुन्छ जवाफ दिनुहोस्। तपाईं "यो सेट र यो बिर्सनु" सक्नुहुन्न।
म पूर्ण सहमत छु। यसले छोटो अवधिमा समय बचत गर्दछ, तर दीर्घ अवधिमा नकरात्मक प्रभाव पार्दछ। यो न केवल गडबडी देखिन्छ, तर यो सामाजिक मिडिया के को पूरा आधारमा जान्छ।